Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo booqasho an la shaacin ku tagay magaalada Baydhabo
Wacaal Media Baydhabo
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya,Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo,halkaas oo mas’uuliyin dowladda ka tirsan ay ku soo dhaweeyen.
Banaan baxyo ayaa horay Baydhabo ugu dhacay kaddib markii la sheegay inuu booqanayo ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo waqtiga baajiyey safarkii uu ku tagi lahaa Baydhabo.
Xarunta gobolka Baay waxaa ka tagan siyaasado is diidan,waxaana ku sugan guddi farsamo oo ay dowladda Soomaaliya u xilsartay xalinta khilaafadka siyaasaded ee deegaanka ka jira.
“Ra’iisal wasaaraha oo ay waheliyan wafdi dowladda ka tirsan ayaa goor dhaweyd soo gaaray magaalada Baydhabo,waxaana hadda ay ku sugan-yihiin garoonka diyaaradaha,”sida waxaa Wacaal u sheegay mas’uul ka tirsan maamulka degmada Baydhabo.
Ammaanka ayaa ad loo adkeeyey saxaafadda ayaana loo diiday inay gudaha u galan garoonka diyaaradaha oo ay ku sugan-yihiin wafdiga ra’iisal wasaaraha dalka.
Wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda oo guddiga qayb ka ah ayaa iyaguna garoonka ku sugan,waxaana la sheegay inay la shiri doonan ra’iisal wasaaraha.
Ma jiro wax guul muuqata ah oo ay guddiga farsamo ee dhismaha maamulka gobollada ay ka gaaren xisaada ka tagaan dhismaha maamulka,waxaana Baydhabo kuwada sugan dhinacyo wada doortay maamullo ka kooban lix gobol iyo saddex gobolka.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa magaalada shirar kula qaatay waxgaradka gobolka oo Odayaal u badna,waxaana la sheegay inay wali socoto waan wanta laga dhex-wado siyaasiyinka deegaanka ee isku diidan dhismaha maamulka.
Dhinaca kale,sarkaal ka tirsan wafdiga ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ee maanta gaaray Baydhabo ayaa Wacaal u sheegay inuu sidoo kale ra’iisal wasaaruhu uu booqan doono degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool, halkaas oo dhowaan lagala wareegay kooxda Al-Shabaab.
Kulamada uu qadan doono ra’iisal wasaaraha wararkeena ayaan ku soo gudbin doona insha allah.
Wacaal Media-Xafiiska Wararka Muqdisho
− two = 4	Wararka